PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-10-07 - Kufezeke iphupho ethola eyokulingisa kwithe Queen
Kufezeke iphupho ethola eyokulingisa kwithe Queen
Uthi ubehlale ekukhulekela ukuba kulo mdlalo
KUPHENDULEKE imithandazo kamichelle Mosalakae ethola ithuba lokulingisa emdlalweni owuchungechunge, ithe Queen, okhonjiswa kumzansi Magic (Channel 161) kusukela ngomsombuluko kuya kulwesihlanu.
Umichelle uthi ubehlale ekukhulekela ukuba yingxenye yalo mdlalo, kwazise uyazifela ngawo.
“I-the Queen wumdlalo okhuluma ngempilo yabantu abajwayelekile nezingqinamba abahlangabezana nazo, ngakho ukuba kuwona bekuyinto ebengiyifisa kakhulu,” kusho lo mlingisi osanda kuwujoyina elingisa indawo kakamina.
UYAKUTHOKOZELA UKULINGISA INDAWO EHLUKILE
Uthi iyamjabulisa kakhulu le ndawo ayidlalayo, emkhiphayo kulokhu akujwayele.
“Njengomlingisi, kuhlale kuyintokozo ukulingisa indawo ehluke kakhulu kunawe nekukhulisayo njengomlingisi,” kusho yena.
Uthi yena wehlukile kakhulu kunokamina kanti uyakuthokozela ukuthi kuningi abantu abasazokubona ngaye kulo mdlalo.
Lo mlingisi abaningi baqale ukumbona emdlalweni Isibaya kanti ngaphambi kwalokho, ubegxile emidlalweni yeshashalazi. Uthi ngesikhathi ethola ithuba lokuba kwisibaya, ubethukile ngoba ubeqala ukulingisa kumabonakude kanti ubesebenza nabantu asebemnkantshubomvu.
“Ngeke ngiqambe amanga, benginovalo kodwa ngokuhamba kwesikhathi abantu ebengisebenza nabo bakwazile ukungenza ngikhululeke, ngagcina sengijwayele,” kusho umichelle.
Ngokusho kwakhe, kusukela esakhula ubekukhonzile ukuma phambi kwabantu abajabulise ngokubahlekisa. Uthi nakuba ekukhonzile ukuhlekisa abantu, kodwa akaziboni eba ngusomahlaya, kunalokho unesifiso sokulingisa indawo kasomahlaya noma emdlalweni wamahlaya.
UBUYE AZIBHALELE AMA-SCRIPT
Umichelle uthi ngendlela azifela ngayo ngomkhakha wezokulingisa, usezithola ebhala imidlalo noma amascript emidlalo uma eziphumulele.
“Eqinisweni isikhathi esiningi sokuphumula sengisichitha ngokuba ngizibhalele eyami imidlalo namascript ngoba nginesifiso sokuba ngibe nowami umdlalo ozokhonjiswa kumabonakude ngelinye ilanga,” kusho le ntokazi ekwazi ukukhuluma izilimi eziyisihlanu okuyisetswana, isingisi, Afrikaans, ispanyol nesifrench. Uthi ukuba kuya ngaye, umdlalo wakhe wokuqala ubungabonakala kumabonakude nangonyaka ozayo kodwa ngenxa yemigomo nemibandela ekhona, lokhu kungagcina kuthatha isikhathi eside.
Uveze ukuthi nakuba engakwazi ukupheka, kodwa ungumbhaki oqavile. “Njengoba ngihlala ngedwa isikhathi esiningi ngifaka ku- oven ngenze into esheshayo, isikhathi sokubhaka kangisenaso kakhulu njengoba ngingumuntu okhonze nokuzivocavoca,” kulanda le ntokazi.
Uphinde abe yinxusa lerevlon. Umichelle uveze nokuthi uyazifela ngokubuka ibhola likanobhutshuzwayo njengoba engumlandeli wokuqina wekaizer Chiefs. Uphethe ngokuxwayisa abantu ngezigebengu ezinkundleni zokuxhumana njengoba naye sezike zamgila.
“Ngadumala ngithola ukuthi kukhona asebekwazile ukungena ekhasini lami le-instagram. Okwangidumaza kakhulu wukuthi ngabe sengikwazile ukuthola abalandeli abangaphezulu kwekhulu lezinkulungwane,” kusho umichelle othi uphoqeleke ukuba agcine evula elisha kanti nabalandeli bakhe basaqhubeka nokwanda kulona.
“Abantu kumele baqaphele kulezi zinkundla ngoba akusibona bonke abantu abeze ngokuhle, kukhona abazokona impilo yabanye,” kuphetha yena.
UMICHELLE Mosalakae uthi kufana nokuthi kuphenduleke imithandazo ngokuthola ithuba lokulingisa kwithe Queen.
UKAMINA (Michelle Mosalakae) utheleke emndenini wakwakhoza nengane yakhe UJP, ebukeka kanjena, eyintokazi ebalekele udlame EDRC.